DF oo war xasaasi ah ka soo saartay arrimaha shidaalka - Caasimada Online
Home Warar DF oo war xasaasi ah ka soo saartay arrimaha shidaalka
DF oo war xasaasi ah ka soo saartay arrimaha shidaalka
Muqdisho (Caasimada Online) – Maareeyaha hay’adda Bartroolka Soomaaliya, Mudane Ibraahim Cali Xuseen oo bixiyey wareysigiisii ugu horreeyey ayaa faah faahin ka bixiyey halka ay marayaan dadaallada lagu doonayo in lagu soo saaro shidaalka dalka.
Ibraahim oo wareysigan siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in sanadka soo socda ee 2021 ay soo gaba-gabeynayaan bixinta qandaraasyada shidaalka Somalia.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in cudurka Coronavirus uu sameeyn ku yeeshay dadaallada socda, islamarkaana uu dib u shigay wada-hadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha Shell iyo Exxon Mobil oo ka shaqeeya arrimaha shidaalka.
“Haddii uusan jiri lahayn Coronavirus, waxaan isku raaci lahayn habka loo marayo, kadibna waxaan heli lahayn heshiiska dhamaadka sanadkan.” ayuu yiri Maareeyaha.
Waxa kale oo uu intaasi ku daray in labadaan shirkadood ay leeyihiin xuquuqda ah in ay iibsadeen xirmooyin shidaal, ka hor inta aysan dhicin dowladdii milatariga ee dalka.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay dowladdu ay yareysay bixinta ruqsada 15 baloog oo ay horey u shaacisay, iyadoo hadda ku soo koobtay illaa 7 baloog, isaga oo sababta ku sheegay caqabadaha dhinaca awooda ee haatan heysta Soomaaliya.
Si kasataba hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo haatan lagu jiro marxalad adag oo kala guur ah, islamarkaana ay ahorey rrimaha shidaal sahminta cabasho uga muujiyeen xubnaha mucaaradka dowladda iyo qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Dhowaan ayey sidoo kale aheyd markii Golaha Wasiirada ay ansixiyeen hay’adda Bartoolka oo dood badan ay ka dhalataya maadaama ay haatan wasiiradu yihiin sii-hayayaal oo kaliya, kadib markii ay codka kalsoonida kala noqdeen Golaha Shacabka.